Lufthansa dia nahavita tamim-pahombiazana ny famaranana ny fampisondrotana ny renivohitra
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Lufthansa dia nahavita tamim-pahombiazana ny famaranana ny fampisondrotana ny renivohitra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovaom-panjakana • fampiasam-bola • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News
Oktobra 11, 2021
Namaky 3 aho
Deutsche Lufthansa AG dia nanonitra tanteraka ny vola mitentina 1.5 lavitrisa euro nalaina avy tamin'ny Silent Partisation I an'ny Tahirim-bola fanamafisana toekarena ao amin'ny Repoblika Federalin'i Alemana (ESF).
Vita soa aman-tsara ny fisondrotan'i Lufthansa renivohitra - mizara vaovao hatramin'ny androany.
Ny vola azo avy amin'ny fiakaran'ny renivohitra dia mivezivezy mivantana mankany amin'ny famerenam-bola amin'ny volan'ny stabilization an'ny German Economic Stabilization Fund (ESF).
Ny famerenam-bola sy fanafoanana tanteraka ny fandraisana anjara mangina ESF I sy II nomanina talohan'ny faran'ny taona.
Miaraka amin'ny famaranana anio ny fitomboan'ny renivohitra Deutsche Lufthansa AG dia nandoa tanteraka ny vola mitentina 1.5 miliara euro nalaina tamin'ny Silent Partisation I an'ny Tahirim-bola fanamafisana toekarena ao amin'ny Repoblika Federalin'i Alemana (ESF). Amin'izany, Deutsche Lufthansa AG dia nametraka ampahany lehibe amin'ny fepetra fanamafisana miavaka an'ny ESF. Ny famerenam-bola dia namboarina mialoha be kokoa noho ny nomanina tany am-boalohany.
Carsten Spohr, tale jeneralin'ny Deutsche Lufthansa AG
2.162 miliara euro ny vola azon'ny fisondrotana renivohitra. Ny fifanakalozana vaovao dia amidy ao amin'ny Burger Stock Exchange nanomboka androany. Vita noho izany ny fampiakarana renivohitra.
Carsten Spohr, CEO an'ny Deutsche Lufthansa AG hoy:
“Faly be izahay fa Deutsche Lufthansa AG dia natsangana tamin'ny volan'ny hetra tao anatin'ny fotoana sarotra indrindra. Io no nahafahana nitahiry asa maherin'ny 100,000 sy niaro azy ireo amin'ny ho avy. Androany, mitazona ny fampanantenanay izahay ary mandoa ampahany betsaka amin'ny vola fampiorenana mialoha ny fotoana nandrasana. Matoky tena bebe kokoa izahay ny amin'ny ho avy. Mihabetsaka ny firenena no manokatra ny sisintaniny, ary mitombo isan'andro ny fangatahana fitsangatsanganana an'habakabaka, indrindra ireo avy amin'ireo mpanao dia lavitra. Na eo aza izany, mbola sarotra ny tontolo iainana ho an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Izany no mahatonga antsika tsy miovaova amin'ny fanohizana ny fiovantsika. Tsy miova ny tanjonay: ny Lufthansa Group dia hiaro hatrany ny toerany amin'ireo vondrona fiaramanidina 5 manerantany. ”
Taorian'ny famerenam-bola androany ny Fandraisana anjara mangina I, ny orinasa dia mikasa ihany koa ny hamerina amin'ny laoniny tanteraka ny Fandraisana anjara Mangina II amin'ny 1 lavitrisa euro alohan'ny faran'ny 2021 ary hamarana ny ampahany tsy ampiasain'ny Fandraisana anjara Mangina I koa alohan'ny faran'ny taona 2021. 1 miliara euro no efa naloina talohan'izay nokasaina (febroary 2021). Ny ESF, izay mitazona 14.09% amin'ny renivola zara, dia nanolo-tena tsy hivarotra ampaham-barotra ao amin'ny orinasa ao anatin'ny enim-bolana taorian'ny fahavitan'ny fampisondrotana ny renivohitra. Na izany aza, ny fivarotana ny tsatoka dia tokony ho vita tsy latsaky ny 24 volana aorian'ny fahavitan'ny fampisondrotana ny renivohitra, raha toa ka novalian'ny orinasa ny Fandraisana anjara mangina I sy II araka izay kasaina hatao ary fenoina ny takian'ny fifanarahana.
Toerana tsara indrindra eran-tany hividianana trano fialan-tsasatra vaovao
Beijing: Ny fitsipika vaovao dia hanamora ny fitsangatsanganana ara-barotra amerikana-Shina
Miarahaba namana: Aostralia no firenena vaovao mamo indrindra eran-tany
Famolavolana ny fizahantany ho an'ny ho avy sy izao tontolo izao: UNWTO Task Force Saudi Style
Birao afrikanina momba ny fizahantany: fizahan-tany tsy misy sakana izao!
Hita izao ny raharaha Hawaii Omicron
Isan'ny firenena tratran'ny variana Omicron vaovao mitombo
Nofoanan'i Shina ny fiverenan'ny Boeing 737 MAX any an-danitra
Fameperana fitsangatsanganana vaovao any Etazonia taorian'ny fandrahonana Omicron
Al Qaeda, Fanjakana Islamika manao iraka hamono ao amin'ny faritr'i Mopti any Maliana any Venise
Vaovao Omicron maika: Johnson & Johnson dia afaka manao Pfizer sy Moderna hahomby kokoa
Vaksiny Sputnik V, lakile vaovao ho an'ny fizahan-tany Arabia Saodita
Ny fipoahan'ny COVID-19 lehibe amin'ny sambo Norveziana Cruise Line vita vaksiny tanteraka
SKAL hifidy Filohan'ny Tontolo Vaovao: Hihaona amin'i Burcin Turkkan, Tiorka-Amerikana Voatosika handray ity Fanamby ity
Auction Divay Barolo: €600,000 ho an'ny Barolo ao anaty barika
Pharmacists Alberta: Mpanome tokan-tena lehibe indrindra amin'ny vaksiny COVID-19 any Alberta
Tsy tokony hanapa-kevitra amin'ny alalan'ny mpitsara voatendry ho azy ny demokrasia
Fitsaboana Sinoa: Nifarana tamim-pahombiazana ny Kongresy Maneran-tany faha-18
Hetsika kambana Skal vaovao any Roma, Budapest ary Madrid Androany